Shariif Xasan iyo diyaarad hub sidda oo ku wajahan magaalada Xudur? - Caasimada Online
Home Warar Shariif Xasan iyo diyaarad hub sidda oo ku wajahan magaalada Xudur?
Shariif Xasan iyo diyaarad hub sidda oo ku wajahan magaalada Xudur?
Baydhabo (Caasimada Online) – Wararka laga helayo Baydhabo ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka Koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan uu ku wajahan magaalada Xududr ee xarunta Gobolka Bakool.
Amaanka magaaladaasi ayaa si weyn loo adkeeyay,iyadoo maalin ka hor ay gaareen Wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Eelay iyo Taliyaha Booliska gaarka ah ee Maamulka Koonfur Galbeed Shiine Macalin Nuur iyo Taliyaha ciidanka Xoogga dalka ee Gobolka Bakool Maxamed Xasan Tima Cadde.
Ilo xog ogaal ah oo ku dhow madaxweyne Shariif Xasan ayaa sheegaya in safarka madaxweynaha la qorsheynayo in maanta ama beri uu Xudur u ambabaxo.
Ujeedka safarka maadxweynaha maamulka Koonfur Galbeed uu ku tagayo Magaalada Xudur ee Gobolka Bakool ayaa lagu sheegay iney tahay sidii loo dhiira gelin lagaa Ciidamada Xooga dalka iyo kuwa maamulka Koonfur galbeed ee halkaasi ku sugan iyo waliba sidii loo muujin lahaa taageero la siiyo Wadaadka Shabaabka ay baadi goobayaan ee Sheikh Muqtaar Roobow Cali Abuu Mansuur.
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Koonfur galbeed ayaa diirada saaraya sidii lagu xoojin lahaa dagaalka lagula jiro Ururka Al-shabaab ee duulaanka ku soo qaaday deegaanka Abal halkaasi oo uu ku sugan yahay Abuu Mansuur iyo maleeshiyaad daacad u ah.